Tsiahivina moa fa ny alatsinainy 3 desambra teo no nisamborana olona 21 tao amin’io toerana io, momba ilay famonoana inspekteran’ny polisy tany Ambodihazinina Fenerivo-Atsinanana. Ka ny 19 tamin’ireo no niakatra fampanoavana ny alatsinainy teo, ary ny iray tamin’ireo no lasa vavolombelona kosa.
Tamin’ny 8 ora sy sasany ka hatramin’ny 6 ora sy sasany hariva no nanaovana izany, tao anatin’ny adiny 10 tsy miato noho izany no nandinihan’ireo mpitsara ny antontan-taratasin’izy ireo izay nataon’ny mpitandro filaminana.
Araka ny fantatra moa dia ny zanaka sefom-pokotanin’Ambodihazinina io nanjary ho vavolombelona io. Ilay sefom-pokontany kosa dia isan’ireo natolotra ny fitsarana.